News - Zigong Xinhua Industrial Co., Ltd. noqday unit agaasimaha cusub ee Zigong
Ururka Warshadaha Sibidhka ee Sibidhka ah, ayaa qabtay seminaar farsamada wax soo saarka carbide sibidhka ah, waxayna hormuud ka ahaayeen dhisidda saldhig wax soo saar baar carbide sibidh
9-kii subaxnimo May 8, 2021, Huidong Hotel ee Magaalada Zigong, Seminarkii 18-aad ee Sibidhka Carbide iyo Seminar Hal-abuurka Farsamada ah oo ay martigelisay Xafiiska Warshadaha iyo Ganacsiga ee Magaalada Zigong oo ay iska kaashadeen qaban-qaabada shirkadeena ayaa la furay. Shirkaddayadu waxay ku guulaysatay inay noqoto mid cusub. Qaybta maamulka.
Kulanka, Mr. Yang oo ka socda shirkadeena ayaa sameeyay
"Hal -abuurka tiknoolajiyadda wax -soo -saarka carbide sibidhka ah iyo isbeddellada horumarinta mustaqbalka" warbixin gaar ah. Waxaan wada -hadal qosol leh la yeeshay hoggaamiyeyaasha iyo dadka mas'uulka ka ah in ka badan 30 soo -saarayaasha carbide -ka sibidhka ee Magaalada Zigong. Qof walba wuxuu isku raacay in shirkadaha carbide sibidhka ah ay hadda yihiin Hawsha horumarineed ee ugu horreysa waa badbaadinta tamarta iyo yaraynta qiiqa, sii wanaajinta wacyiga deegaanka, iyo tayaynta wax soo saarka. Jihada horumarinta mustaqbalka ee carbide sibidhka ah waa inay ahaato hal -abuurnimo farsamo si loo yareeyo wasakhaynta loona hagaajiyo wax -soo -saarka wax -soo -saarka.
Isla mar ahaantaana, Ururka Warshadaha Carbide Sibidhka ee Zigong wuxuu ka dhigay shirkaddeena wax soosaar ka sarreeya badeecadaha carbide sibidhka leh sida waxsoosaarka warshadeed ee mustaqbalka ee Magaalada Zigong. Mr. Yang oo ka tirsan shirkadeena ayaa sheegay in shirkadeenu ay ku dadaali doonto inay shirkadda ku dhisto Shiinaha muddo saddex sano gudahood ah. Saldhigga wax -soo -saarka carbide ee ugu horreeya sibidhka adduunka oo leh tayada ugu xirfadda badan.
Isla mar ahaantaana, shirkaddu waxay tixgelinaysaa horumarka guud, iyada oo xoogga la saarayo soo -saarka iyo cilmi -baarista iyo horumarinta taarikada carbide -ka sibidhka leh, faylasha wareegga carbide -ka, baalasha -qoryaha, mindiyaha warshadaha carbide -sibidhka, iyo alaabta caaryada ee sibidhka. Ku dadaal inaad noqoto saldhig wax-soo-saar xirfadeed oo si fiican loo yaqaan oo hormuud u ah alaabta carbide sibidhka ah iyo aaladaha jaridda carbide-ka.
Iyada oo loo marayo shirkan, dhammaan shaqaalaha shirkaddu waxay dareemayaan inaan garabka ku hayno himilada dib -u -noolaynta warshadda carbide tungsten ee sibidhka leh ee Shiinaha, waana inaan sidoo kale ku dadaalnaa inaan hal -abuurnno si aan uga dhigno warshadda carbide -ka sibidhka ee Shiinaha si ay mar kale u gaadho iftiin heer caalami ah.
Shirku wuxuu si habsami leh ku dhammaaday 4 -tii galabnimo May 8, 2021.
Waqtiga dhejinta: May-08-2021